Keeniyaatti poolisiin hanna qormaataa eeguuf daree gale namoota hedduun qeeqameera - BBC News Afaan Oromoo
Keeniyaatti poolisiin hanna qormaataa eeguuf daree gale namoota hedduun qeeqameera
Poolisii Keeniyatti hanna qormaataa eeguuf daree gale
Suuraan poolisii daree keessa dhaabachuun qormaatni akka hin hatamne eegaa ture erga mul'atee namootni baay'een qeeqaa jiru.
Barattootni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Keeniyaatti qormaata fudhataa jiru. Hanni qormaataa Keeniyaa keessatti tooftaalee garaagaraan babal'ataa jira.
Qondaaltotni mootummaas hanna qormaataa hanbisuuf jecha tarkaanfii garaagaraa fidhachaa jiru. Haa tahu malee hanna qormaataa kana loltoota hidhataniin eegsisuun garuu qaama kanaa tahuunsaa waan ifatti barame hin qabu.
Aster Nijeerii dubartii ganna 35ti. Mucaanshee bara kana qormaata sadarkaa tokkoffaa fudhatti. Poolisiin haala nageenyaa fi hanna qormaataa gaggeeffamuuf yaalamu kan eeguu qabu karaa bakkeeti malee meeshaa hidhatee daree keessa galuu hin qabu jetti.
''Nama guddaa taatee iyyuu yeroo loltuun hidhatee cinaakee taa'u dhiphina guddaatu namatti dhagahama. Daree keessatti keessatti ammoo miirri isaa maal tahuu danda'a,'' jetti.
Kenyaatti barattoonni mana barumsaa torba guban
Sababii qormaataaf interneetiin cufame
Qormaata Kooriyaa Kibbaa taatee addaa keessummeessu
Dursaan barsiisotaa mana barumsaa Naayiroobii tokko poolisiin hidhatee daree keessa galuunsaa dhimma wal nama gaafachiisu mitii jedhe.
Nageenya fi eegumsi qormaataa sanaa ol barbaachisaa waan taheef eegumsaaf daree keessa galuunsaanii waan haaraa mitii jedhe. Garuu daree keessa galuun waan barame miti jedhee, manneetiin barnootaa tokko tokko garuu hanna qormaataa xiqqeessuuf itti fayyadamu jedhe.
Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Olompik Naayiroobii jirutti Poolisoonni hidhatan nama tokkoyyuu ol hin galchinu jechuun dhorkaniiru.
Manneetii barnootaa kaan keessattis namni kamiyyuu akka ol hin galleef ajajni nutti kennameera jechuun eegumsa irra turan.
Naayiroobii keessatti pirezidaanti Uhuuruu Keeniyaataan mana barumsaa tokko daawwataniiru. Boodas waajjirri isaanii suuraa kana ifa godhan.
Madda suuraa, Piresident Office
Pirezidanti Uhuruun barattota qormaata fudhatan yeroo daawwatu
Pirezidanti Uhuuruun mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Uhuruu Gaardeensi jedhamu daawwchuu himuun, qormaanni biyyaalessaa kennamaa jiru karaa milkaa'aa taheen deemaa jiras jedhaniiru.
Keeniyaatti qormaanni biyyaalessaa kennama kan jiru yoo tahu yeroo dhiyoon as hanni qormaataa yaadessaa tahaa dhufeera.
Qormaata dandeettii barnootaa barattootaaf of eeggannoo guddaan itti taasifamu
Yaaddoo beelli nam-tolcheen Tigraay keessaa uumee
Warseessi jaalallee barbaacha Taayiwaanii gara Jaappaan imalte
Basaasaan duraanii Israa’eel icciitii Mossaad Iraaniin itti basaasaa ture saaxile